.ချစ်သူက စနေ သားသမီးလေးဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ ! – Askstyle
.ချစ်သူက စနေ သားသမီးလေးဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ !
စနေသားသမီးတွေက လူ့ဘဝကို စရောက်ပြီ ဆိုကတည်းက စိတ်ကြီးတတ်ကြပါတယ်။ ဒေါသဖြစ်ပြီ ဆိုရင်လည်း အရာဝတ္ထု တစ်ခုခုနဲ့ ကိုယ့်အသားကို နာကျင်အောင် လုပ်တတ်တယ်။​
စ​နေ သားသမီး​ကို ချစ်သူတော်မယ် ဆိုရင်….
စနေသားသမီးတွေက လူ့ဘဝကို စရောက်ပြီ ဆိုကတည်းက စိတ်ကြီးတတ်ကြပါတယ်။ ဒေါသဖြစ်ပြီ ဆိုရင်လည်း အရာဝတ္ထု တစ်ခုခုနဲ့ ကိုယ့်အသားကို နာကျင်အောင် လုပ်တတ်တယ်။ ပြောချင်တဲ့စကားကို သွယ်ဝိုက် မပြောတတ်ဘဲ တိုက်ရိုက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတတ်တယ်။ အစွဲအလန်း ကြီးတယ်။ အမှတ်တရတွေကို သတိရနေတတ်တယ်။ ကိုယ့်အပေါ် ကောင်းတဲ့လူဆိုရင် လွယ်လွယ်နဲ့ မမေ့တတ်ကြဘူး။
ဒေါသကြီးရင်လည်း သူများနဲ့ မတူအောင်ပါပဲ။ စိတ်ကြီးတယ် မဟုတ်မခံတတ်ဘူး။ အချိန် ခဏလေးနဲ့ ဒေါသအရမ်း ထွက်တတ်ပေမယ့် ဟုန်းခနဲ ထတောက်တဲ့မီးလို ဒေါသတွေက ခဏပဲ။ ကြာကြာတော့ စိတ်ထဲမထားတတ်ဘူး။ ကိုယ့်ရှေ့မှာ သတ္တဝါတွေမြင်ရင် ချစ်တတ်တယ်။ သနားတတ်တဲ့ စိတ်ထားရှိကြတယ်။ မျက်နှာတည်ပြီး ရင်ထဲမှာတော့ တကယ်ခင်တတ်တဲ့ စိတ်ထား အပြည့်အဝ ရှိတယ်။
အနေအေးပေမယ့် ကိုယ့်ကို လာခင်တဲ့ လူတွေနဲ့ဆို ဖော်ရွေစွာ နေတတ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အချစ် ခင်မင်မှုတွေကိုလည်း လိုချင်ကြတယ်။ မိသားစုတွေရဲ့ ဂရုစိုက်မှုကိုလည်း ခံချင်ကြတာလည်း စနေ ပါ။ စိတ်ဆိုးနေရင် မျိုသိပ်မထားတတ်ဘူး ဖွင့်ပြောမိတတ်တယ်။ ပြောပီးရင်လည်း အကြောင်းတစ်ခုကို အပြန်ပြန်အလှန်လှန် စဉ်းစားတတ်ပြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေတတ်တာလည်း စနေပါပဲ။
ချစ်သူနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ရန်ဖြစ်ပြီး မခေါ်ကြရင် ကိုယ်က ဘယ်တော့မှ အရင်စ မခေါ်ချင်ကြဘူး။ မာနအိုးတွေပါ။ သူ့ဘက်က စခေါ်ပြီဆိုရင်လည်း သူ့ထက် နှစ်ဆ ခင်မင်ပြတတ်တယ်။ ခင်ရတဲ့သူတွေကို ကိစ္စတွေတိုင်း မပြောပြတတ်ဘူး။ အချို့သော အရာတွေကို လျှို့ဝှက်ထားတတ်တယ်။ ကိုယ်လုပ်တဲ့ ကိစ္စတွေတိုင်းကို လက်ကြောတင်းအောင် အကောင်းဆုံး လုပ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ အရာတွေကို အကောင်းပြောလည်း ခံချင်ကြပါတယ်။
သီချင်းတွေ ဒဏ္ဍာရီစိတ်ကူးယဉ် ဆန်ဆန်တွေကို နှစ်သက်ကြတယ်။ တခါတလေ တယောက်ထဲရှိရင် သီချင်းတွေ ညည်းနေတတ်တယ်။ အိမ်မက်တွေကိုလည်း အမျိုးမျိုးအထအန ကောက်တတ်ကြတယ်။ အမျှော်အမြင်ကြီးတယ်။ တိုးတက်ချင်တဲ့ စိတ်တွေ အင်မတန် ရှိတယ်။ စိတ်သဘောထား ကောင်းတတ်ကြတာ စနေပါ။
စနသေားသမီးတှကေ လူ့ဘဝကို စရောကျပွီ ဆိုကတညျးက စိတျကွီးတတျကွပါတယျ။ ဒေါသဖွဈပွီ ဆိုရငျလညျး အရာဝတ်ထု တဈခုခုနဲ့ ကိုယျ့အသားကို နာကငျြအောငျ လုပျတတျတယျ။
စနေ သားသမီးကို ခဈြသူတျောမယျ ဆိုရငျ….
စနသေားသမီးတှကေ လူ့ဘဝကို စရောကျပွီ ဆိုကတညျးက စိတျကွီးတတျကွပါတယျ။ ဒေါသဖွဈပွီ ဆိုရငျလညျး အရာဝတ်ထု တဈခုခုနဲ့ ကိုယျ့အသားကို နာကငျြအောငျ လုပျတတျတယျ။ ပွောခငျြတဲ့စကားကို သှယျဝိုကျ မပွောတတျဘဲ တိုကျရိုကျ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောတတျတယျ။ အစှဲအလနျး ကွီးတယျ။ အမှတျတရတှကေို သတိရနတေတျတယျ။ ကိုယျ့အပျေါ ကောငျးတဲ့လူဆိုရငျ လှယျလှယျနဲ့ မမတေ့တျကွဘူး။
ဒေါသကွီးရငျလညျး သူမြားနဲ့ မတူအောငျပါပဲ။ စိတျကွီးတယျ မဟုတျမခံတတျဘူး။ အခြိနျ ခဏလေးနဲ့ ဒေါသအရမျး ထှကျတတျပမေယျ့ ဟုနျးခနဲ ထတောကျတဲ့မီးလို ဒေါသတှကေ ခဏပဲ။ ကွာကွာတော့ စိတျထဲမထားတတျဘူး။ ကိုယျ့ရှမှေ့ာ သတ်တဝါတှမွေငျရငျ ခဈြတတျတယျ။ သနားတတျတဲ့ စိတျထားရှိကွတယျ။ မကျြနှာတညျပွီး ရငျထဲမှာတော့ တကယျခငျတတျတဲ့ စိတျထား အပွညျ့အဝ ရှိတယျ။
အနအေေးပမေယျ့ ကိုယျ့ကို လာခငျတဲ့ လူတှနေဲ့ဆို ဖျောရှစှော နတေတျပါတယျ။ သူငယျခငျြးတှရေဲ့ အခဈြ ခငျမငျမှုတှကေိုလညျး လိုခငျြကွတယျ။ မိသားစုတှရေဲ့ ဂရုစိုကျမှုကိုလညျး ခံခငျြကွတာလညျး စနေ ပါ။ စိတျဆိုးနရေငျ မြိုသိပျမထားတတျဘူး ဖှငျ့ပွောမိတတျတယျ။ ပွောပီးရငျလညျး အကွောငျးတဈခုကို အပွနျပွနျအလှနျလှနျ စဉျးစားတတျပွီး စိတျမကောငျး ဖွဈနတေတျတာလညျး စနပေါပဲ။
ခဈြသူနဲ့ဖွဈဖွဈ သူငယျခငျြးနဲ့ပဲဖွဈဖွဈ ရနျဖွဈပွီး မချေါကွရငျ ကိုယျက ဘယျတော့မှ အရငျစ မချေါခငျြကွဘူး။ မာနအိုးတှပေါ။ သူ့ဘကျက စချေါပွီဆိုရငျလညျး သူ့ထကျ နှဈဆ ခငျမငျပွတတျတယျ။ ခငျရတဲ့သူတှကေို ကိစ်စတှတေိုငျး မပွောပွတတျဘူး။ အခြို့သော အရာတှကေို လြှို့ဝှကျထားတတျတယျ။ ကိုယျလုပျတဲ့ ကိစ်စတှတေိုငျးကို လကျကွောတငျးအောငျ အကောငျးဆုံး လုပျကွပါတယျ။ ကိုယျလုပျထားတဲ့ အရာတှကေို အကောငျးပွောလညျး ခံခငျြကွပါတယျ။
သီခငျြးတှေ ဒဏ်ဍာရီစိတျကူးယဉျ ဆနျဆနျတှကေို နှဈသကျကွတယျ။ တခါတလေ တယောကျထဲရှိရငျ သီခငျြးတှေ ညညျးနတေတျတယျ။ အိမျမကျတှကေိုလညျး အမြိုးမြိုးအထအန ကောကျတတျကွတယျ။ အမြှျောအမွငျကွီးတယျ။ တိုးတကျခငျြတဲ့ စိတျတှေ အငျမတနျ ရှိတယျ။ စိတျသဘောထား ကောငျးတတျကွတာ စနပေါ။